सरल ग्राहक सेवा | Martech Zone
शनिबार, अगस्ट 26, 2006 मंगलवार, सेप्टेम्बर 1, 2015 Douglas Karr
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यो सँधै मार्केटि Marketing, ब्लगहरू, भाइरल मेसेजिंग, आदि हुँदैन। कहिलेकाँही यो साधारण ग्राहक सेवा मात्र हो। मसँग फोस्सिल वाच छ जुन नजिक र मलाई प्यारो छ किनभने मेरा बच्चाहरूले यो एक जन्मदिनको लागि खरीद गरे। मलाई आशा छ यो सधैंभरि रहन्छ। ब्याट्री एक वा दुई बर्ष लाग्दछ। मेरो ब्याट्री केहि दिन अघि बाहिर दियो तर मैले घडी लगाए। लाउसो किसिमको देखिन्छ तर मैले यो गरें किनभने जब मैले यसलाई हेरें भने म आफ्ना बच्चाहरूको बारेमा सोच्छु ... र यदि मैले घडीलाई हेरेर रोकिदिएँ भने, म ब्याट्री लिन बिर्सिदिनँ।
मेरो कामबाट तल हो विन्डसर ज्वेलर्स (मेरिडियनको पश्चिम तर्फ सर्कलको दक्षिण)। म त्यहाँ कहिले पनि खुट्टा मा गएको थिएन (अरे ... म एक्लो 38 XNUMX वर्षको बुबा हो, मलाई केको लागि गहना चाहिन्छ?) तर उनीहरूले मेरो लागि ब्याट्री स्थापना गर्दछन् कि भनेर हेर्ने निर्णय गरे।
म अगाडिको ढोकामा हिंड्दै गर्दा, एक प्यारी आइमाई उहाँसँग आएर सोधिन् कि उनले मलाई मद्दत गर्न सक्छिन्। मैले उनलाई घडीको बारेमा बताएँ र उनले यो मबाट लिएर र मलाई एउटा वाचि techn टेक्निशियन (?) लाई हस्तान्तरण गरे जसको स्टोरमा त्यहीं अफिस थियो। केही मिनेटमै (गम्भीरताका साथ), उनले नयाँ ब्याट्री भित्र्याए, समय सेट गरे, घडी सफा गरे, र मलाई फिर्ता हस्तान्तरण गरे। उसले ती सुन्दर ज्वेलर चश्मा लगाए र शाब्दिक रूपमा यति चाँडो सारियो कि मैले उसले यो कसरी गरें भनेर मुश्किलले देख्न सकें। मसँग भित्तामा पोष्ट गरिएको लेख पढ्नको लागि मात्र समय आएको थियो र त्यसले अहंकारी बनायो कि मानिसहरू जो इण्डियानापोलिसबाट सरेका छन् अझै पनी विन्डसरलाई भरोसा गर्दछन् उनीहरूको घडीहरू र घडीहरू ठीक गर्न। मलाई कुनै शंका छैन।
मार्केटिंगले तपाईंलाई व्यापार गर्न सक्दछ, तर महान ग्राहक सेवा यसलाई राख्न कहिले असफल हुने छैन।
केही मिनेटमा मैले शुल्क तिरेको (एक ठूलो 'a,, ब्याट्री समावेश) र पसलबाट बाहिर निस्कें। मलाई ग्रीटिंग गरेकी महिलाले मलाई छिट्टै फर्केर आउन आग्रह गरे। वाह।
मलाई थाहा छैन म फेरि जौहरीको आवश्यकतामा कहिले पर्नेछु। यदि म होईन भने पनि, तपाईंलाई थाहा छ म अब कहाँबाट एक वर्ष हुनेछु जब मेरो हेर्ने ब्याट्री मर्दछ!
टैग: ग्राहक सेवाइंडियानापोलिसगहनागहना चश्मागहनाविन्डसर जौहरीहरू
I Bloggards घृणा